Umzimba womuntu nobunzima ezihlukahlukene izifo, elula futhi eziyinkimbinkimbi, zonke izinsuku zokuphila kwakhe. Kunokuba yakamuva ochungechungeni izinkinga zezempilo hlala ukuvuvukala wamathumbu isifo. Ukuze ulwe nabo ukuthuthukisa eziningi imithi ehlukene nezimiso ezahlukene isinyathelo.
Into mesalazine iyona ingxenye eyinhloko yeqembu ngokwanele ezinkulu kwemithi ( "salofalk" analogs) ukuze ulwe nezifo ezithile ukuvuvukala wamathumbu.
Ukwakheka "salofalk", pharmacodynamics
Njengoba kushiwo ngaphambili, isithako esebenzayo eyinhloko esikhathazeka ngayo mesalazine nomuthi. Njengoba asizayo ukhonza eziningana izingxenye, ikakhulukazi, ezifana sodium carbonate, glycine, povidone, microcrystalline cellulose, silicas, futhi titanium, i-calcium stearate, sodium croscarmellose, hypromellose main butylmethacrylate copolymer.
"Salofalk" (granules, amaphilisi, suppositories, ukumiswa) kuvimbela (depresses) izinqubo neutrophil futhi lipoxygenase zamagama e abantu prostaglandins futhi leukotrienes. Ingqikithi asebenzayo kunciphisa izinga ukufuduka, phagocytosis futhi degranulation ka neutrophil nama kunciphisa uketshezi lymphocyte. Ngaphezu kwalokho, i-nomuthi uyakwazi ngibopha khulula ezizivelelayo kamuva abachithe, isb ubukisa umphumela antioxidant. Futhi mesalazine uyakwazi ephonsa radicals khulula kwakhiwa kusukela esisheshayo zinhlobo oksijini.
Le ndawo main lapho kutholakala ukusetshenziswa "salofalk" - ukwelashwa ngoba izilonda emathunjini futhi isifo Crohn.
Lesi sifo wokuqala kuyinqubo ezingamahlalakhona ukuvuvukala ongakabi elicwengwé uhlobo. Ukuthuthukiswa Its kubangelwa ukuxhumana ka ufuzo nemibandela kwemvelo.
isifo Crohn kungenziwa kwachazwa ngokuthi ezingamahlalakhona ukuvuvukala granulomatous yokusetshenziswa pheshana emathunjini. Le nqubo kungaba thatha zonke izingxenye isimiso sokugaya ukudla bungene, ithinta zonke zamatshe tube wokugaya ukudla. Umphumela kungenzeka ukuthuthukiswa lymphadenitis, ulceration kanye nezibazi of wamathumbu odongeni akuyona.
Ifomu izidakamizwa ukukhululwa
Abakhiqizi zinikeza amakhasimende abo lesi sidakamizwa "salofalk" (efanayo kulesi sici ingahluka) endaweni amafomu ambalwa ukukhiqizwa ezahlukene.
Ngendlela ithebhulethi ingaqukatha 250 noma 500 mg ingxenye esebenzayo main - mesalazine. Kokunye sachet ingaqukatha 500 mg noma 1 g we ketshezi main. I nomuthi ngesimo suppositories (suppositories kwezokuphatha rectal) iyatholakala ku imithamo emibili - 250 kanye 500 mg ingxenye eyinhloko. Futhi angathengwa Pharmacy amagwebu ukumiswa kwezokuphatha rectal. Indlela ephumelela kakhulu isiguli ukukhululwa ifomu ngamunye kuzokusiza ukhetha udokotela okwelaphayo.
amaphilisi sokuphuzisa lwemithi
Isikali Standard abadala - kathathu ngosuku 500 mg. Uma kutholakale ukuthi une-degree kabi sesifo, kwenza udokotela ukuya unelungelo ukwandisa umthamo kuya 3-4 g ngosuku. Inkambo yokwelapha zingaba khona cishe usuku 2 kuya ku-3 izinyanga. Uma imithi esithathwayo njengoba isilinganiso izifo, ke kwenziwa isikimu okujwayelekile (1.5 g ngemithamo ezintathu emini).
iziguli Younger 'Isicelo salofalk "Umsebenzisi (analogs zingase umthamo lwemithi) uncoma ukunikeza ngokuhambisana isisindo ingane. Abantwana abane-esisindo esingeqile 40 kg, udokotela ekunika 250 mg zomuthi kathathu ngosuku. Uma isisindo sengane idlula 40 kg, ekubonisa umthamo efanayo abadala: 500 mg kathathu ngosuku.
Tablets kangcono kuthathwe sekuphothulwe ukudla, hhayi ukuhlafuna futhi siphuza neziphuzo uketshezi (mhlawumbe amanzi).
Isikimu we elimbudumbudu
Leli fomu ukukhululwa zomuthi "salofalk" (elimbudumbudu) uqokwa udokotela ukuba khona ikakhulukazi ngamunye, esekelwe esithombeni Imininingwane emitholampilo impilo lesiguli. Ezimweni eziningi ngesikhathi exacerbation of izilonda emathunjini isiguli inikezwa ukuthola umthamo 500 mg noma 1 g kathathu emini (t. E. ivolumu yansuku zonke nomuthi ivela 1.5 kuya 3.0 g). Ungakwazi ukuthatha umthamo owodwa kanye 3 izikhwama. Uma isiguli e ukuthethelelwa, "salofalk" athathe umthamo 1.5 g ngelanga:-ke kungenziwa ihlukaniswe 3 ngemithamo kuthathwe noma zonke zomuthi ngesikhathi esisodwa.
Uma sikhuluma i exacerbation of izilonda emathunjini ezinganeni (ezineminyaka engu-6 nangaphezulu), udokotela ukuba khona lunquma izidakamizwa ngesilinganiso 30-50 mg mesalazine ngalinye 1 kg isisindo. Zonke umthamo lingathathwa ngesikhathi esisodwa noma zihlukaniswe 3 ngemithamo usuku lonke.
I elimbudumbudu kufanele agqoke nezilimi, ngaphandle ukuhlafuna nokugwinya. Umuthi kumele siphuza neziphuzo kakhudlwana. Ukuze umphumela zokwelapha kwaba elimbudumbudu ukumelana kufanele athathwe njalo futhi njalo. isigaba okukhulu izilonda emathunjini ngokuvamile ufa ngaphakathi izinyanga 2-3, umthamo lamukeleke kangcono nsuku zonke sehliselwe 1.5 g ngosuku.
Inhloso imodi kwesicelo suppositories
"Salofalk" imfundo (amakhandlela) mathupha uncoma umthamo 500 mg (1 rectal suppository 500 mg noma 2 - 250 mg) kathathu ngosuku. Uma lesi sifo esigabeni oyingozi, umthamo wansuku zonke kungenziwa kabili. Uma isiguli inikezwa Yiqiniso eside yokwelapha noma target reception - luyingxenye prophylactic (zokuvimbela lokubuya kwesifo), umthamo evamile kulokhu 250 mg (1 ikhandlela) kathathu emini.
Ezigulini abasebasha Isikali incike isisindo emzimbeni. Izingane enesisindo esingaphansi 40 kg "salofalk" (amakhandlela) yokusetshenziswa ulawula ukhombe ½ isilinganiso esithathwa omdala, t. E. izikhathi 250 mg ezintathu ngosuku. Uma isisindo sengane idlula 40 kg, kunikezelwe ukuba umthamo izidakamizwa njengoba for iziguli omdala (kathathu ngosuku 500 mg).
Izidakamizwa "salofalk" - ukumiswa itholakala amabhodlela enikeziwe kwezokuphatha rectal. Inqubo wenziwa kanye kusihlwa ngaphambi sokulala. Isiguli ngaphambi kokwenziwa zomuthi Kunconywa ukukhulula namathumbu. Inani nsuku zonke zomuthi ikhethwa esekelwe isisindo isiguli (ngokuya 30-50 mg / kg). Uma lesi sifo ezinzima noma ungaphakathi inqubo owandiswayo, umthamo esiphezulu emini ongafinyelela kuze iminyaka 3 ukuvimbela ngokuvamile ochwepheshe Ukuphinda ukuncoma ukuthatha "salofalk" ngomlomo (amaphilisi). Kulokhu umthamo (nsuku zonke) nazo eyabelwe isisindo - 15-30 mg esisindo / kg. Zonke ivolumu nsuku zonke imithi usuku lonke Kunconywa ukuba yahlukaniswa ngezigaba ezimbili.
Izimo ethola "salofalk"
Ukusebenzisa izidakamizwa "salofalk" (analogue - iyathinteka) is contraindicated kubantu nge hypersensitivity kuya izingxenye eziyinhloko nasizayo zomuthi. Akwamukelekile lokuqoka amaphilisi izingane ezingaphansi kweminyaka 3 ubudala, elimbudumbudu - ukuze engu-6 ubudala. Awunayo ukuthatha imithi isiguli esingamahlalakhona ezinzima kwezinso noma hepatic.
Musa ukhombe "salofalk" abantu bathambekele ukuthuthukisa ukopha, izifo ezihlukahlukene hematopoietic uhlelo. Abaphethwe oluhambisana diathesis uhlobo isifo isilonda kwanoma iyiphi pheshana emathunjini futhi akufanele bathathe imithi ngesisekelo mesalazine.
I elimbudumbudu nomuthi engamukeleki zaphathwa iziguli phenylketonuria (esiwufuzo elihlobene ne umzimba ukuphazamiseka kwengqondo of phenylalanine kuholela ezinzima CNS izilonda ngesimo akahlakaniphile kahle).
Ngokuphathelene abesifazane abakhulelwe kanye lactating, ukusetshenziswa kwezidakamizwa kule 3 Ezinyangeni zokuqala zokukhulelwa kufanele walungisiswa izinkomba esiqinile. Phakathi 2-3 trimesters aphoyintimenti "salofalk elingapheli" kungenzeka kuphela ezimweni lapho kusolwa nethonya elihle impilo owesifazane obusa sengcupheni umntwana. Ngokusho kobufakazi efanayo uyamukeleka ukusebenzisa elimbudumbudu 'salofalk "lactation. Nokho, uma ingane ikhishwa yisisu, kubalulekile ukuba ayiyeke ibele. Futhi ngokuvamile, ngokufanele kuhlelwe ngaphambi ukuqala ukukhulelwa, bayayeka ukuphuza "salofalk" noma, okungenani, ukunciphisa umthamo wathola.
ukungaphathwa kahle imithi kuba cishe kunoma iyiphi izidakamizwa. Kube khona ngaphandle futhi "salofalk" (nozakwabo Russian kanye). CNS side effects kukhona izimpawu kungenzeka njengoba ikhanda, isiyezi, ukundindizela, tinnitus, ukucindezeleka, Ukudlikizela, paraesthesia. pheshana emathunjini angaphendula ukusetshenziswa "salofalk" ubuhlungu esiswini, ukuvuvukala nohudo, ukucanuzela kwenhliziyo, ukuhlanza. ukuthuthukiswa olungenzeka kwesibindi, hepatic transaminase amagugu ukushintsha. Cardio-semithambo uhlelo ingathola tachycardia, umfutho wegazi ukuguquguquka (hyper- noma hypotension), ubuhlungu besifuba, dyspnea.
Kwezinye izimo, iziguli ungezwakala on ukuthuthukisa myalgia, arthralgia. Ngaphezu kwalokho, izidakamizwa kungabangela kwegazi, leukopenia, thrombocytopenia, anuria, oliguria, hematuria, crystalluria.
Of eziningi nokungezwani komzimba nezinto kungenzeka ukulunywa, ukuqubuka kwesikhumba, i-erythema, bronchospasm, pericarditis futhi myocarditis. In iziguli hypersensitivity kuya mesalazine angagcina izifo ezifana nephritis interstitial, nephrotic syndrome, isigaba okukhulu pancreatitis. Ngo iqembu ahlukene iziguli "salofalk" (efana yakhe kanye) ebangela nezimpawu ezifanayo ukuze a syndrome ka omzimba izicubu erythematosus.
I "salofalk" Ubuningi obanele kwemithi analogue esemazweni esebenzayo eyinhloko. Kanjani, isibonelo, esikhundleni "salofalk" - amakhandlela? Analogue, ngokuvamile izithakazelo abathengi bezempilo amiswa - kuyinto suppositories "Pentas" futhi "Samezil". Lezi imithi isithako main kuyinto mesalazine kubenza babe nemiphumela efanayo kwemithi emzimbeni womuntu.
"Mesakol" - omunye asetshenziswa kabanzi analog "salofalk" (e granules, amaphilisi).
Ngaphandle umsebenzi analog ingxenye, kukhona iqembu elikhulu yizidakamizwa ezifanayo nomphumela oqabulayo. Le mithi okuthwala ngokuphepha "Azathioprine" futhi "Alginatol", "hydrocortisone" futhi "Dexamethasone" "Diprospan" futhi "Irmalaks", "prednisolone" futhi "Sulfasalazine". Uhlu kuqhubeka.
Ngaphambi kokuba uqale ukwelashwa futhi ngesikhatsi ukwelashwa futhi emva uphelela abahlinzeki batusa ukuhlolwa kwegazi kanye nomchamo ezivamile. Futhi ngaphambi ukwelashwa futhi inqubo kubalulekile ukuqapha kwemigomo sokusebenza kwesibindi. Monitoring is arcade kwenziwa ngemva kwezinsuku ezingu-14 emva Ukuqalwa yokwelapha, bese omunye izikhathi 2-3 ngezikhathi amaviki 4. Uma kukhona imiphumela yokuhlolwa ngaphakathi kwemikhawulo evamile, survey ukuqapha eyenziwa njalo ezinyangeni 3. Uma ngokungazelelwe ezinye uhlobo ukuphambuka sizoba ekucubunguleni, kubalulekile ukuba afeze control ukuhlolwa ngokushesha.
Ekumisweni noma yiluphi uhlobo imithi "salofalk" (amakhandlela, analogue amaphilisi, granules, ukumiswa) ukuze iziguli isifuba somoya bronchial, udokotela liyadingeka ukuqapha ngokucophelela isimo iziguli ngesikhathi yokwelapha. Uma isiguli inomlando livela kungenzeka amathuba okuba nemiphumela engemihle uma nithatha "Sulfasalazine" isimo sempilo yabantu ezinjalo kufanele ziqashwe ngokucophelela esigabeni sokuqala ukwelashwa "Salofalk." Uma bebonisa i-acute ukungabekezelelani ukusabela (Ukudlikizela, ubuhlungu besisu, ukuqubuka, imfiva), ukusetshenziswa kwezidakamizwa kufanele inqanyulwe ngokushesha.
Lapho ushayela noma imisebenzi ezidinga high speed lengqondo ukusabela, seziguli ezithola "salofalk", kufanele uqaphe kakhulu.
Amakhambi ukusebenza futhi ephephile isilungulela kwabesifazane abakhulelwe
Ihhotela lesi "Mercure Sochi Centre" * 4: Izibuyekezo ifoni